Somalia iyo Kenya oo heshiis gaaray. | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Somalia iyo Kenya oo heshiis gaaray.
Somalia iyo Kenya oo heshiis gaaray.
Nayroobi, Nofeembar 14, 2019: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan miro dhal ah la qaatay dhiggiisa dalka Kenya Mudane Uhuru Kenyatta oo ku soo booqday hooyga Madaxweynuhu uu ku degan yahay magaalada Nayroobi.
Previous articleWasiirka warfaafinta XFS oo magacaabay afhayeenka wasaaradda.
Next articleQM oo 18.7 Milyan oo Doollar ku bixisay fatahaadaha ka dhacay Soomaaliya